Chii chakaitika pabhavhadhe rako? | Martech Zone
Svondo, Kukadzi 25, 2007 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Pane imwe nguva yandakazvonyongoka apo zuva rangu rekuzvarwa raiuya. Chii chakaitika pazuva rangu rekuzvarwa? Kubvumbi 19 kune zviitiko zvinonakidza zvinoitika pairi… kuputika kweUSS Iowa, Wako, Oklahoma guta… ugh. Kudzokera munhoroondo, hazviite zviri nani. Raive zuva rakatangwa neAmerican Revolution!
Wikipedia ine mukova wezuva rega rega regore iwe raunogona kuverenga. Ini ndaida kuwedzera kuti ndiro raive zuva randakazvarwa, asi ini handina chokwadi kuti inhoroondo chaidzo. 😉
Kukadzi 25, 2007 na4: 36 PM
Oops… ndine urombo kuti haina kushanda muIEE (Chaizvoizvo ibrowser inotyisa). Ndangozvigadzirisa!
Kukadzi 26, 2007 na3: 38 PM
Kune rimwe divi ini ndinogovana zuva rekuzvarwa naChristopher Lee naVincent Price, naLou Gossett Jr. (Chivabvu 27) Chishandiso chakanaka chekutarisa, Doug.
Kukadzi 26, 2007 na5: 50 PM
Zvingave zvakave nyore kwazvo kunze kwekuti IE7 haina kukanganisa kukosha kuchinhu chakasarudzwa. Saka fomu rakatora mukamuri kaviri iro.
Iwo matatu anotonhorera ekugovana zuva rekuzvarwa!
Kukadzi 26, 2007 na3: 46 PM
Kutonhorera - Ini ndinogovana zuva rangu rekuzvarwa ndisina zvishoma pane Cameron Diaz 🙂
(Uye, hongu, IE is zvinotyisa. Ini ndakashanda rinenge svondo pane inotonhorera blog dhizaini, chete kuti ndizive kuti, kunyangwe yaive XML yaiteerera, haina kungopa nenzira kwayo muIE.)
Kukadzi 26, 2007 na5: 51 PM
Cameron Diaz anoita kunge mumwe weavo nyeredzi ane musoro wake wakanangana pamapfudzi ake. Uye iye anopisa! 🙂
Mahara Ekuzvarwa eCards
May 12, 2007 pa 4: 35 PM
bday rangu riri muna Chikumi 21 uye hezvino zvinotaurwa newikipedia:
"Zuva iri rinowanzo mucherechedzo nguva yezhizha kuchamhembe kwenyika uye nguva yechando kumaodzanyemba kwenyika, uye ndiro zuva regore nemaawa akareba masikati machena kuchamhembe kwenyika uye rakapfupika kumaodzanyemba."